Radio Muqdisho: Ma Qolka Kaydka Sawarida Ee Madaxwayne Hassan Sheikh Mohamoud Baa? | http://kismaayodaily.com
Waxaa bishu markay ahayd Majo (May) 7deedi iyo 19keedii, 2014, ku soo baxay shabakada ee ku hadasha afka dowlada ee loo yaqaan Radio Muqdisho labo qoraal oo aad arkayso in ay yihiin dhoolotus muujinaaya in Madaxwaynahu musharax u yahay in uu rabilahaa in mar kale la doorto, waa marka ay dhacdo doorashada sanadka 2016 (waa ninkuu ALLAH) gaarsiiyo.
Labdaas qoraal ee kusoo baxay Radio Muqdisho, waxay ka hadlayeen socod lugeed uu madaxwaynahu ku maray qaybo ka mida ah magaalda Muqdisho. Qoraalka hore oo uu cinwaankiisu ahaa: “DAAWO SAWIRRADA:- Madaxweyne Xasan Sheekh Oo Socod Lug Ah Ku Maray Qeybo Ka Mid Ah Caasimadda Kadib Soo Dhaweyntiisa”. Kan dabena, waxaa uu cinwaankiisu ahaa: “Madaxweyne Xasan Sh. Oo Xalay Kormeeray Saldhigyada Booliiska Ee Degmooyin Ka Tirsan G/Banaadir(Sawirro)“
Labadaas qoraal ee aan kor ku soo xusay, waxaa wehliyey in kabadan 200 oo sawir. Inta badan sawirada waxay muujinayeen socod lugeedka madaxwaynahu ku maray qaybo ka mida magaalada Xamar. Inkasta oo aad sawirada ku arkayso ilaalo badan oo hareer ordaysa ama garab socota madaxwaynaha, hadana, sida lagu yiqiin soo dhawayta madaxwaynayaasha, sawiradu nama tusayn dad badan oo hareeraha wadada u taagan in ay soo dhawayaan madaxwaynaha.
Anoo usoo noqonaaya qoraalkayga muhamadiisa, aqristow aan ku waydiiyo su’aashaan: Radio Muqdisho ma kuula muuqdaa in ay isu bedeshay Qolka-Kaydka-Sawirada ee Madaxwaynaha Dowlada Federaalka ee Soomaaliya? Maxaase keenay in meesha uu madaxwaynahu socod-lugeedka ku marayey, oo ah qaybo ka mida caasimada, ay u ekaato in ay tahay meel bandow lagu soo rogey? Maxaase u diidey dadka in ay soo baxaan oo ay soo dhaweeyaan madaxwaynaha?
Sida caadadu tahay, qoraalada waxaa ku filan hal ama labo sawir. Wariyeyaasha shabakada Radio Muqdisho waxaa ku haboonayd in ay ka bixiyaan booqashada madaxwaynaha qoraal tafatiran, intii dadwaynaha waqtiga looga qaadi lahaa Albumka madaxwaynahu uga danleeyahay musharaxnimadiisa. Hadiise dhinac kale laga eego arintaan, waxay abuuri kartaa xaq daro lagula kaco dadka kale ee rajada ka qaba in ay u istaagaan Doorashada Madaxtinimada Dowlada Federaalka ee dhici doonta sanadka 2016ka (waa ninkuu ALLAH gaarsiiyee) madaama aysan haysan fursada iyo awooda uu madaxwaynahu ku isticmaali karo Radioyaha dadwaynaha. War dhamaantiis, waxaan sugnaaba waa 1000 sawir oo ku lifaaqan qoralada madaxwaynaha ku saabsan.
Waxaa aruuriyey: Mohamed Barre – Junlay “Buluf” qoraa madaxbanaan, oo wax ka qora arimaha Soomaalida, degana magaalda Minneapolis, ee MN – junlay99@aol.com
Kismaayodaily On May - 20 - 2014